काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बोनस सेयरका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता नेपाल बैंकको ३७८.६८ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता ४३१.७० रुपैयाँ रहेको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार नेपाल बैंकको सेयर...
मूल्य समायोजनपछि एभरेष्ट बैंक, शाइन रेसुंगा बैंक र सबैको लघुवित्तको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि तीन कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले एभरेष्ट बैंक, शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंक र सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरभाउ समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता एभरेष्ट बैंकको ५५० रुपैयाँ, ४०३.८६ रुपैयाँ र सबैको लघुवित्तको...
मूल्य समायोजनपछि महिला लघुवित्तको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले महिला लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ३ हजार ६५८.९८ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो लघुवित्तको सेयरभाउ प्रतिकित्ता ५ हजार ३९७ रुपैयाँ रहेको...
मूल्य समायोजनपछि मुक्तिनाथ विकास बैंकको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बोनस सेयरका लागि मुक्तिनाथ विकास बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ५७१.६४ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो बैंकको प्रतिकित्ता ६७२.१० रुपैयाँ कायम भएको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार नै यो बैंकको सेयर...
मूल्य समायोजनपछि मेगा बैंक र ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि घोषित बोनस सेयरका लागि मेगा बैंक नेपाल र ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता मेगा बैंकको २९२.७३ रुपैयाँ र ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको १ हजार ६९९.३० रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार...
मूल्य समायोजनपछि बैंक अफ काठमाण्डू, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र प्राइम लाइफको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । बोनसका लागि दुई वाणिज्य बैंकसहित तीन कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले बैंक अफ काठमाण्डू, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजनपछि प्रतिकित्ता बैंक अफ काठमाण्डूको ३१० रुपैयाँ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको ४८६.४५ रुपैयाँ...
मूल्य समायोजनपछि निफ्रा र मेरोमाइक्रोफाइनान्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) र मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले मूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता निफ्राको ३३१.४८ रुपैयाँ र मेरोमाइक्रोफाइनान्सको १ हजार २०० रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको...
मूल्य समायोजनपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै यो बैंकको प्रतिकित्ता ४०८.४९ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता ४६० रुपैयाँ रहेको थियो। बैंक सञ्चालक समितिको गत असोज १७ गते...
मूल्य समायोजनपछि फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै यो लघुवित्तको प्रतिकित्ता ९२१.८२ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो लघुवित्त सेयरभाउ प्रतिकित्ता १ हजार १४...
मूल्य समायोजनपछि लक्ष्मी र आरएसडीसी लघुवित्तको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले लक्ष्मी लघुवित्त र आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सले मूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता लक्ष्मी लघुवित्तको १ हजार ६०८.८३ रुपैयाँ र आरएसडीसी लघुवित्तको ७९२.७३ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार...
मूल्य समायोजनपछि गुराँस लाइफको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बोनस सेयरका लागि गुराँस लाइफको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ६१८.०१ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर ६५२ रुपैयाँ रहेको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार नै यो कम्पनीको सेयर...
मूल्य समायोजनपछि आशा र स्वरोजगार लघुवित्तको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि दुई लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्स (नेप्से) ले आशा लघुवित्त र स्वरोजगार लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता आशाको १५१९.९२ रुपैयाँ र स्वरोजगारको १२७२ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार आशाको १८९९.९०...
मूल्य समायोजनपछि कामना सेवा विकास बैंकको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि कामना सेवा विकास बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता कामना सेवाको ६०७ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ७१९ रुपैयाँ थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार यो बैंकको सेयर...
मूल्य समायोजनपछि कुमारी बैंक र गुराँस लघुवित्तको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि कुमारी बैंक र गुराँस लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता कुमारी बैंकको २६४ रुपैयाँ र गुराँस लघुवित्तको १३४८.०९ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता कुमारीको २८० रुपैयाँ र गुराँस...
मूल्य समायोजनपछि सानिमा र माछापुच्छ्रे बैंकको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि सानिमा बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले मूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता सानिमाको ४१७.७८ रुपैयाँ र माछापुच्छ्रेको ३२२.०७ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता सानिमाको ४८८.८० रुपैयाँ र...